Modern nefashoni mumunda nzvimbo muimba yokugezera, achiwedzera inosanganisira kugadzwa munhu ano Spa cabins. Zvinokuchengetedzai kutaura kuti mvura kazhinji kutsiva zvachose chinyakare kugeza. Kana umbozha dzimba, pamwe yakakura zvimbudzi, inopisa kabhini zvingabudirira vagare wakanaka yokugezera.
The chikuru kushandisa akawanda wokunaya ndechokuti anonge chaizvo chiduku. Izvi zvikuru vanhu vaya vanogara diki dzokugara pamwe diki kugeza mukamuri. Uyezve, inonaya ano yakakura mune functionality.
Kushandiswa ano zvokuvakisa, zvichiita inonaya havasi chete akanaka chaizvo uye kwezvokufuka, asi zvikuru Zvinokosha zvakaisvonaka uye kutenga-siyana yevatengi.
On Kutengeswa unogona kuwana mvura mhando mbiri: acrylic magirazi hydromassage kabhini uye nzvimbo yemutekenyi. Mumwe nemumwe kwemarudzi idzi ine zvakanakira nekuipira. Somuenzaniso, acrylic Mvura akashongedzerwa zvakakwana kuita kugeza pamwe masaja jets. Kazhinji, zviri agadzirira kugadzira pamwe lockable magirazi mikova uye akavaka-mu yepamusoro yokugezera hurongwa. Kazhinji, mukati imwe nhamba yacho jets. Kune panhongonya yokugezera, inokosha footrest uye mwenje. Kazhinji hydromassage kabhini iri vakapakata imwe zvemagetsi kuzvidzora.
In cockpits ano pane kunyange yakavakwa-mumvura filtration ezvinhu, pane kufefetedza Hurongwa, zvinokwanisika kuti bhati chiutsi, kana vane retafura basa Beach. Kazhinji rinopisa kabhini pane mukana kuteerera redhiyo kana zvemimhanzi.
Uye chii chingataurwa pamusoro chimiro wokunaya zano rakadaro. Kazhinji kacho, izvi angled zvokusarudza. Mune zvimwe zviitiko, unogona kuona mienzaniso vari kuisa mumwe madziro. Mikova zvingaitwa kana Semi-tenderera kana mativi chimiro.
Glass hydromassage kabhini, akavapindurawo, zvisinganyanyi kurwa uye zvakawanda yakashongedzwa chitarisiko. Kazhinji, cabins yakadaro ungano rinoshandiswa chete yakakwirira chaizvo yepamusoro fenicha, izvo zvinoratidza pacharo zvakajeka munguva kushanda munzvimbo dzakakwirira mwando ezvinhu. Kunakisa wokunaya izvi, kuti vanobvumira kuti kunonyanyisa zvakadini kuramba pfungwa nzvimbo muimba yokugezera.
8 shamisa asi zvechokwadi zvinhu pamusoro mvura hurongwa
How kuti chando-chena kugeza pasina chinetso uye zvakaipa?
Nezvionioni nokuti kuchimbuzi. howa kusiyana
Sauna-bharero: uchapupu kubva vaya vakashandisa
Utachiona nokuti cesspools: nhoroondo uye kurumbidza kuti kushandisa
Drug "Psorilom": akaongororazve psoriasis, description, mirayiridzo kushandiswa uye sezvamunoita
Men boxers: ndezvipi?
Siberian omujunipa: mapikicha, tsananguro mhando, kudyara uye kutarisirwa
Mafuta "Kapsikam" pamusoro cellulite: wongororo kuvarapi uye vatengi
Tricyrtis: kudyara uye kutarisirwa. Types Tricyrtis. Description ruva
Unyanzvi uye kugamuchirwa kwekuteerera kwakanyatsonaka mune zvepfungwa
Traumatologist-orthopedist - ruzivo rwevarume
"Drita Hotel", Turkey, 5 *: wongororo, mapikicha, tsananguro
Chii AV misa? Atrioventricular misa: Zvinokonzera, Zviratidzo, kuongorora chirwere neMarapirwo
Cooking pamusha: goona mu multivarka
Sei OTG waya nemaoko avo